မတူညီတဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ကောင်းမွန်သာလွန်တဲ့ Management (စီမံခန့်ခွဲမှု) ကြောင့်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ တူညီတဲ့ နိုင်ငံ၊ တူညီတဲ့ ဈေးကွက်၊ တူညီတဲ့ ခေတ်ပြိုင်မှာ မတူညီစွာအောင်မြင်စေမှုဟာ၊ Management ကြောင့်ပါပဲ။ Management မှာ ဘာအချက်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားသလဲမေးရင်- အဓိက အသုံးအနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ ဒီအချက်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းပါ။
Objective: ရည်ရွယ်ချက် (လုပ်ငန်းပြီးစီးချိန်တွင် ထွက်ပေါ်လာရန် အကျိုးတရားများ)
Policies: မူဝါဒ (မည်သို့လုပ်ဆောင်မည် ရေဘူယျလမ်းညွှန်ချက်/ လုပ်ငန်းဗျူဟာ)
Management: စီမံခန့်ခွဲမှု (အရင်းအမြစ်များ နေရာတကျထားအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မှု)
Delegation: တာဝန်ခွဲဝေခြင်း (အချိန်တိုအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးရန် နေရာချထားခြင်း)
Responsibility: တာဝန်ယူမှု (အချိန်ကာလတခုအတွင်း ပြီးစီးဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်)
Accountability: တာဝန်ခံယူမှု (မျှော်လင့်ချက်/မမျှော်လင့်ချက် တာဝန်ခံယူနိုင်ခြင်း)
Strategy: မဟာဗျူဟာ (လုပ်ငန်းအောင်မြင်နိုင်စေရန် စီစဉ်ဆန်းသစ်ဖန်တီးနိုင်ခြင်း)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တူညီတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ Telenor, Ooredoo, MPT ဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်မှာ မတူညီစွာ အောင်မြင်နေမှုတွေကို သုံးသပ်လျှင် ပိုမိုမြင်သာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့ အဓိကပါဝင်နေတဲ့ 5-Ps Management ပုံစံမှာလည်းပဲ.....
(1) Where do we want to go . . (Purpose) . . ? (မည်သည့် ဦးတည်လုပ်ဆောင်မှု၊ ပန်းတိုင်)
(2) How can we get there . . (Planning) . .? (မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ထိုနေရာသို့ရှေ့ရှု၊ အစီအစဉ်)
(3) Who should be involved . . (People) . . ? (မည်သူများ ပူးပေါင်းပါဝင်သင့် လူ၊ လုပ်ကိုင်ဖက်)
(4) Which way are the best . . (Priority) . . ? (မည်သည့်နည်းလမ်းက အကောင်းဆုံး၊ ဦးစားပေး)
(5) What do we set-up easiest . . (Process) . . ? (မည်သို့ လွယ်ကူစွာစတင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်)
စတဲ့ အချက်တွေကို နယ်အစုံမှာ B.D.M သင်တန်းတွေပြုလုပ်ရင်း သင်တန်းတက်သူ (၁၈၀၀) နီးပါးရဲ့ Best Feedback အကြိုက်နှစ် သက်ဆုံးနဲ့ မျက်လုံးဝင့်စွာ စိတ်ဝင်တစားဖြစ်စေခဲ့တာ ဒီအချက်တွေဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော် သေချာပေါက် ပြောရဲပါတယ် - ဒီ အသုံးနှုန်းတွေရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ကောင်းစွာဖန်တီးပုံဖော်နိုင်လျှင် မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းတွေမှာ မတူညီတဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရစေနိုင်လိမ့်ဆိုတာပါပဲ။
မိတ်ဆွေ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေနဲ့၊ လုပ်ငန်းရှင် SMEs များအတွက် ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်လာတဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးအတွက် လိုအပ်မှုတခုခုကို ကူညီပေးနိုင်လျှင် အစဉ်စိတ်ကျေနပ်လျှက် - ဆက်လက်ဖော်ပြပါဦးမယ်။